Misy izao ny betas faharoa an'ny watchOS 7.6, tvOS, iOS ary iPadOS 14.7 | Vaovao IPhone
Betsaka ny developer ho an'ny watchOS 7.6, tvOS, iOS ary iPadOS 14.7 ankehitriny
Angel Gonzalez | | iOS 14, About us
Amin'ny 7 Jona ho avy izao dia ho fantatsika ny vaovao momba ny rafitra fiasa vaovao avy amin'i Apple. Araka ny tsaho farany, fiovana lehibe amin'ny iOS sy iPadOS 15, miaraka amina endrika vaovao sy fanavaozana vaovao misimisy kokoa amin'ny iPadOS. Na izany aza ary mandra-pahatongan'izany, Apple dia tsy maintsy manohy ny programa fanavaozana ny rafitra fiasa izay nanan-kery hatramin'izao. Ora vitsy lasa izay namoaka ny beta faharoa an'ny developerOS an'ny watchOS 7.6, tvOS, iOS ary iPadOS 14.7. Tsy misy vaovao lehibe andrasana amin'ireto fanavaozana ireto izay mety ho farany amin'ny fahatongavan'ireo watchOS 8 betas sy ny andiany iOS 15 iray manontolo.
Mifanaraka amin'ny betas izahay: beta faharoa amin'ny watchOS 7.6, tvOS, iOS ary iPadOS 14.7
Ny betas voalohany amin'ireto rafitra fiasa ireto dia tsy nahita vaovao tsara. Raha ny marina, iOS 14.7 dia handray vaovao momba ny kalitaon'ny rivotra any amin'ny firenena vaovao, ao anatin'izany i Espana. Etsy ankilany, avy amin'ny app Home an'ny iPadOS 14.7 dia azonao atao ny mampiditra timer sy countdown. Ary izany rehetra izany no vaovao mety ho hita tao amin'ireo beta voalohany navoaka roa herinandro lasa izay.
Ora vitsy lasa izay, Apple dia nanavao ny rafi-piasany rehetra tamin'ny beta ary namoaka ny kinova faharoa amin'ireo rafitra voalaza teo aloha: watchOS 7.6, tvOS, iOS ary iPadOS 14.7. Mba hanavaozana azy dia alao fotsiny ary apetaho amin'ny solosainao ny mari-pankasitrahana raha toa ka mbola tsy nataonao talohan'izay na fanavaozana avy amin'ny fampiharana Settings ho an'ny kinova beta vaovao izany.
iOS 14.7 dia handray ny vaovao momba ny kalitaon'ny rivotra amin'ny fampiharana Weather amin'ny firenena hafa
Ary koa, omaly dia fantatsika izany Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 14.5.1, izay nanakana anay tsy hampidina ny fitaovana ho amin'ity kinova ity. Noho izany dia afaka miverina amin'ny iOS 14.6 ihany isika raha mila izany, izay ny kinova Apple ho an'ny fitaovan'izy ireo. Na dia tsy misy vaovao lehibe andrasana amin'ireto betas ireto aza, hampahafantarinay anao ny lafiny rehetra mety hitranga vokatry ny fanavaozana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Betsaka ny developer ho an'ny watchOS 7.6, tvOS, iOS ary iPadOS 14.7 ankehitriny
Apple TV + dia efa misy amin'ny fitaovana TV Nvidia Shield
Ity no iPhone 13 araka ny fivoahan'ny rakitra CAD